Drug Allergy (ဆေးဓါတ်မတည့်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Drug Allergy (ဆေးဓါတ်မတည့်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Drug Allergy (ဆေးဓါတ်မတည့်ခြင်း)
Drug Allergy (ဆေးဓါတ်မတည့်ခြင်း) ကဘာလဲ။
ဆေးဓါတ်မတည့်ခြင်းဆိုတာ ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ကိုယ်တွင်းရှိကိုယ်ခံအားစနစ်မှ ပုံမှန်မဟုတ်သော တုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ဆေးဆိုင်မှဝယ်သောဆေး၊ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသောဆေး၊ တိုင်းရင်းဆေးစသည့် မည်သည့်ဆေးနှင့်မဆို ဓါတ်မတည့်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆေးဓါတ်မတည့်ခြင်းဟာ လူတွေအပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ အဖြစ်အများဆုံးလက္ခဏာများမှာ အင်ပြင်ထွက်ခြင်း၊ နီမြန်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖျားနာခြင်းဖြစ်တယ်။
အလွန်ဆိုးရွားသော ဓါတ်မတည့်မှုများတွင် Anaphylasis ဟုခေါ်သည့် ရှော့ခ်တစ်မျိုးရခြင်းကြောင့် သွေးပေါင်ချိန် ရုတ်တရက်ထိုးကျခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပြီး အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးဓါတ်မတည့်ခြင်းဟာ ဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမဟုတ်ပဲ ဆေးရဲ့ပမာဏများသွားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
Drug Allergy (ဆေးဓါတ်မတည့်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
မည်သူမဆို ဆေးဓါတ်မတည့်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကံဆိုးတာကတော့ သင်ဟာ သင်နှင့်မတည့်သည့်ဆေးကို စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ နည်းမရှိပါ။ တော်တော်များများတွင် ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို သုံးပြီးမှ ဓါတ်မတည့်ခြင်းကို သိရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါက အသက်အရွယ်မရွေးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အဖြစ်များစေတဲ့ အချက်တွေကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် ဆေးဓါတ်မတည့်မှုမှ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ထပ်မံသိလိုသော အချက်များရှိပါက ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
Drug Allergy (ဆေးဓါတ်မတည့်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ဆေးဓါတ်မတည့်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေက ဆေးသောက်ပြီး၁နာရီအတွင်း ဖြစ်လေ့ရှိကြတယ်။ အတွေ့ရများသော လက္ခဏာများမှာ…
မျက်လုံးများ ယားယံခြင်းနှင့် မျက်ရည်ထွက်ခြင်း
တချို့သောဆေးများက လူတွေကို ဆိုးရွားသော ဓါတ်မတည့်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဆိုးရွားသော ဓါတ်ပြုမှုဖြစ်ပြီး ဆေးကုသရန်လိုအပ်သော အခြေအနေများမှာ…
နှလုံးခုန်နှုန်း သို့မဟုတ် သွေးခုန်နှုန်းမြန်ခြင်း
လေပြွန်နှင့် လည်ချောင်းကျဉ်းပြီး အသက်ရှူရခက်ခြင်း
စိတ်ပူပန်ခြင်း သို့မဟုတ် မူးဝေခြင်း
ဆေးဓါတ်မတည့်ခြင်းဟာ ဆေးသောက်ပြီး ရက်ပေါင်းများစွာ သို့မဟုတ် ရက်သတ္တပတ်ကြာမှ ဖြစ်တတ်သလို ဆေးသုံးစွဲမှု ရပ်တန့်ပြီးတဲ့အချိန်အထိ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ဆေးဓါတ်မတည့်မှု ကြာသောအချိန်တွင် တွေ့ရသော လက္ခဏာများမှာ…
ဖျားနာခြင်း၊ အဆစ်နာခြင်း၊ နီရဲခြင်း၊ ယောင်ယမ်းခြင်းနှင့် ပျို့အန်ခြင်း
သွေးအားနည်းခြင်း။ သွေးနီဥပမာဏ ကျဆင်းခြင်းကြောင့် မောပန်းခြင်း၊ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်းနှင့် တခြားလက္ခဏာများဖြစ်ခြင်း
နီရဲသောအဖုအပိန့်များထခြင်း။ သွေးဖြူဥပမာဏ များပြားခြင်းကြောင့် တစ်ကိုယ်လုံး ဖောရောင်ခြင်း၊ အကျိတ်များကြီးခြင်း နှင့် အသည်းရောင်ရောဂါများ ပြန်ဖြစ်ခြင်း
ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း ။ ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်းကြောင့် ဖျားနာခြင်း၊ ဆီးထဲသွေးပါခြင်း၊ တစ်ကိုယ်လုံး ဖောရောင်ခြင်း၊ စိတ်ထွေပြားခြင်းနှင့် တခြားလက္ခဏာများဖြစ်ခြင်း
အထက်တွင်မပါသော လက္ခဏာများလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာအကြောင်း ပြည့်စုံစွာသိလိုပါက ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
ဆေးဓါတ်မတည့်ခြင်းဟာ အပျော့စားလက္ခဏာကနေ အသက်သေဆုံးတဲ့အထိ ပြင်းထန်သော လက္ခဏာတွေကိုပါ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော အချက်များကို ခံစားရပါက ဆရာဝန်နှင့် ပြသသင့်ပါတယ်။
အရေပြားပေါ်တွင် နီရဲပြီးနာကျင်သော အရည်ကြည်ဖုများ လျှင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့ခြင်း
အရည်ကြည်ဖုများမပေါက်ဘဲ အရေပြားအပေါ်လွှာများ အချပ်လိုက် ကွာကျခြင်း
မျက်လုံး၊ ပါးစပ်နှင့် လိင်အင်္ဂါများတွင် အဖုအပိန့်များ သို့မဟုတ် အရည်ကြည်ဖုများထခြင်း
သွေးပေါင်ကျခြင်းနှင့် အသက်ရှူရခက်ခြင်းကဲ့သို့ ပြင်းထန်သောခြေအနေတွင် အရေးပေါ်ကုသမှု ခံယူသင့်ပါတယ်။
ဆေးတွင်ပါသော ဓါတုပစ္စည်းများနှင့် သင်၏ကိုယ်ခံအားတို့ ဓါတ်ပြုသောကြောင့် ဆေးဓါတ်မတည့်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ ကိုယ်ခံအားစနစ်ဟာ ဆေးကို အန္တရာယ်ရှိသော ဓါတုပစ္စည်းနှင့် အမှတ်မှားပြီး တိုက်ခိုက်ပါတယ်။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုအရ ပထမဆုံးအကြိမ်သုံးသော ဆေးများ၊ အစားအသောက်၊ ရေ နှင့် တချို့သောအခြေအနေအတွက် သောက်သော ဆေးများဟာ ဓါတ်မတည့်မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။
သင့်ကိုယ်ခံအားဟာ ပထမဆုံးအကြိမ်သောက်သော ဆေးဝါးကို ဆိုးရွားစွာ ဓါတ်ပြုသောအခါ သင့်ကိုယ်တွင်းတွင် ရောဂါကာကွယ်သော ပဋိဇီဝပစ္စည်းများ ထွက်လာပြီး ဆေးဓါတ်မတည့်မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။
မည်သည့်ဆေးမဆို ဓါတ်မတည့်မှုကို ဖြစ်စေသော်လည်း တချို့သောဆေးများဟာ ဓါတ်မတည့်မှုကို ပိုဖြစ်စေပါတယ်။
Aspirin နှင့် စတီးရွိုက်မပါသော အယောင်ကျဆေးကဲ့သို့ အကိုက်အခဲပျောက် အဖျားကျဆေးများ
သွေးလေးဘက်နာကိုကုသတဲ့ ကိုယ်ခံအားကို ဖျက်ဆီးသော ဆေးမျိုးများ
စတီးရွိုက် လိမ်းဆေးများ နှင့် လိုးရှုင်းများ
HIV; AIDS ရောဂါအတွက် သောက်ရသောဆေးများ
ပျားဝတ်မှုန်မှ ထုတ်ထားသော ပစ္စည်းများ
Echinacea ( အအေးမိရောဂါအတွက် သုံးသော ဆေးဖက်ဝင် အပင်များ)
ရောဂါရှာဖွေရာတွင် သုံးသော ဆိုးဆေးများ(radiocontrast media)
Drug Allergy (ဆေးဓါတ်မတည့်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုအရ ပထမဆုံးအကြိမ်သုံးသော ဆေးများ၊ အစားအသောက်၊ ရေ နှင့် တချို့သောအခြေအနေအတွက် သောက်သော ဆေးများဟာ ဓါတ်မတည့်မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ သင့်ကိုယ်ခံအားဟာ ပထမဆုံးအကြိမ်သောက်သော ဆေးဝါးကို ဆိုးရွားစွာ ဓါတ်ပြုသောအခါ သင့်ကိုယ်တွင်းတွင် ရောဂါကာကွယ်သော ပဋိဇီဝပစ္စည်းများ ထွက်လာပြီး ဆေးဓါတ်မတည့်မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။
မည်သည့်ဆေးမဆို ဓါတ်မတည့်မှုကို ဖြစ်စေသော်လည်း တချို့သောဆေးများဟာ ဓါတ်မတည့်မှုကို ပိုဖြစ်စေပါတယ်။ ထိုဆေးများမှာ…
Drug Allergy (ဆေးဓါတ်မတည့်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဆေးဓါတ်မတည့်မှုကို ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများစွာ ရှိပါတယ်။ ယင်းတို့မှာ…
သင့်မှာ အစားအသောက် ဓါတ်မတည့်မှု သို့မဟုတ် အဖျားရောဂါ တစ်ခုခု ဖြစ်ဖူးခြင်း
ပါဝင်ပစ္စည်းတူသော တခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း
မိသားစုတွင်း ဆေးဓါတ်မတည့်သူများ ရှိခြင်း
ဆေးတစ်မျိုးကို ပမာဏများများသောက်ခြင်း၊ ထပ်ခါထပ်ခါသောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကြာရှည်စွဲသောက်ခြင်း
HIV သို့မဟုတ် Epstein Barr ဗိုင်းရပ်စ်ကဲ့သို့ ရောဂါပိုးများ ကူးစက်မှုကို ခံစားနေရခြင်း
Drug Allergy (ဆေးဓါတ်မတည့်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆေးဓါတ်မတည့်ခြင်းကို အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် ရောဂါရှာဖွေ သိရှိနိုင်ပါတယ်။
စမ်းသပ်ခြင်း ။ ဆရာဝန်မှ ဆေးဓါတ်မတည့်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာများဖြစ်တဲ့ အနီရောင် အဖုအပိန့်များထခြင်း နှင့် အရည်ကြည်ဖုများပေါက်ခြင်းကို စစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် သင့်နှလုံးခုန်သံကို နားထောင်ခြင်း နှင့် သင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို စစ်ဆေးခြင်း
သင့်ဓါတ်မတည့်မှုကို ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းများကို မေးမြန်းခြင်း၊ သင်သောက်ထားတဲ့ဆေးနှင့် အခြေအနေကို မေးမြန်းခြင်း။ ပါဝင်ပစ္စည်းတူသော တခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိ၊ မရှိမေးမြန်းခြင်း။သင်ဟာ အမျိုးအစားတူ ဆေးတစ်မျိုးနှင့် ဓါတ်မတည့်လျှင် ပြန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သင်အားဓါတ်မတည့်မှု ဖြစ်စေတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို သိရှိရန် ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။
Drug Allergy (ဆေးဓါတ်မတည့်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဆေးဓါတ်မတည့်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာများကို သက်သာစေသောဆေးများ သို့မဟုတ် ဓါတ်မတည့်ခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ ဆေးများကို ကုသနိုင်တဲ့ တခြားနည်းတွေကို သုံးပြီး ဆေးဓါတ်မတည့်ခြင်းကို ကုသနိုင်ပါတယ်။
ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော လက္ခဏာများကို ကုသခြင်း
ဓါတ်မတည့်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော ဆေးကို ရပ်လိုက်ပါ
ဓါတ်မတည့်ခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ ကိုယ်ခံအားကို မထွက်စေရန် Antihistamine (အယားပျောက်ဆေး) များကို သောက်ခြင်း
သွေးပေါင်ကျခြင်းကို ထိန်းရန်နှင့် အသက်ရှူရာတွင် အဆင်ပြေစေရန် Ephnephrine ဆေးကို ချက်ချင်းထိုး၍ ဆေးရုံတွင် ကုသမှုခံယူခြင်း
ဆေးဓါတ်မတည့်မှုကို ကုသရန်အတွက် လိုအပ်သော ကုထုံးတွေကို ဆရာဝန်၏ ဂရုစိုက် ညွှန်ကြားမှုအောက်တွင် ပြုလုပ်ပါ။ ဒီဖော်ပြပါ နည်းလမ်းတွေက သင့်ကို ဓါတ်မတည့်မှုမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆေးပမာဏ အနည်းငယ်နှင့်စ၍ ၁၅-၃၀မိနစ်အကြာမှစပြီး ဆေးပမာဏတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးပြီး ဓါတ်မတည့်မှု မဖြစ်ခင်အထိ ပေးလို့ရပါတယ်။
ဆေးမထိုးမိ ဆေးစမ်းပြီး ဓါတ်မတည့်မှု ဖြစ်၊ မဖြစ်စောင့်ကြည့်ခြင်း
နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးတွေက သင့်ကို ဆေးဓါတ်မတည့်မှုမှ ဘယ်လို ကာကွယ်ပေးနိုင်သလဲ။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးတွေက သင့်ကို ဆေးဓါတ်မတည့်မှုမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သင့်ကို ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်စေသော အရာတွေကို ရှောင်ပါ။
ဖြစ်နိုင်လျှင် ကိုယ်တိုင်ထိုးနိုင်သော Epinephrine ဆေးကို ဆောင်ထားပါ။
Anti-histamine(အယားပျောက်ဆေး) သို့မဟုတ် prednisone(စတီးရွိုက်ဆေး)များကို ဆောင်ထားပါ။
ဆေးမပေးခင် ဆရာဝန်ကို သင်နှင့်မတည့်သော ဆေးများရှိပါက ကြိုပြောပါ။
အင်းဆက်များအနီးအနားတွင် ရှိပါက အကိုက်မခံရစေရန် သတိထားပြီးရှောင်ရှားပါ။
အစားအသောက်များ အစားခင်နှင့် မဝယ်ခင် အညွှန်းကို သေချာဖတ်ပါ။
သင်သိလိုသော အချက်များရှိပါက ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး သင့်အတွက် ပိုပြီးကောင်းမွန်သော အဖြေများကို ရယူနိုင်ပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဩဂုတ် 2, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စက်တင်ဘာ 29, 2017
Reference: Drug Allergy. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/drug-allergy/basics/definition/con-20033346. Accessed July 9, 2016.